मोबाइल हराएको छ ? यी'आइएमइआइ' नम्बर मिले प्रहरीमा सम्पर्क गर्नुहोस् - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मोबाइल हराएको छ ? यी’आइएमइआइ’ नम्बर मिले प्रहरीमा सम्पर्क गर्नुहोस्
काठमाडौं । मोबाइल चोरी भएर वा हराएका कारण समस्यामा पर्नु भएको छ ? प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका १४ वटा मोबाइल फेला पारेको छ। फेला परेको मोबाइलको आइएमइआइ (इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी) नम्बर कसैको हराएको मोबाइलसँग मिले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सम्पर्क राख्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरु, भिडभाड हुने स्थानहरु, एकान्त सार्वजनिक बाटो तथा प्रतिक्षालयहरुमा रहेको बेला मोबाइल चोरी गरी फरार पाकेटमारहरुको साथबाट प्रहरीले मोबाइल फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कडा हुदाँ हुँदैपनि पाकेटमार, चोरीको घटना भने रोकिएका छैन् ।
फेला परेको मोबाइल ब्रान्ड र आइएमइआइ नम्बर
सामसुङ डुअस 3599450705565210
सामसुङ (सेतो रङको) 3529560779987914
सामसुङ 352975071957028 / 353000071957024
सामसुङ जिटिएस 355545050696959
सामसुङ जे२ 355316073861669/ 355317073861667
लेनोभो 355729048909712, 355729048940717
नोकिया 355156066199912/ 355156069889914
इन्टेक्स 941494000430705/ 911494000430713
सोनी सि २ 358099057237778
, सोनी सि २ 2305 – 353267061876619
टेक्नो 352511097101125/ 352511097101133
कहाँ हुन्छ आइएमइआइ नम्बर
मोबाइल सेटको ब्याट्रि रहने ठाउँमा आइएमआइ नम्बर लेखिएको हुन्छ । अथवा मोबाइल किन्दा मोबाइलको वारेन्टी कार्डमा पनि यो नम्बर हुन्छ । यदी तपाईले आफ्नो आइएमइआइ नम्बर पत्ता लागउन सक्नु भएन भने स्टार ह्याज शुन्य ६ र ह्याज थिच्नुभयो भनेपनि तपाईको आइएमइआइ नम्बर मोबाइलमा देखिन्छ । यसरी देखिने दुईवटा आइएमइआइ नम्बरमध्ये तपाईले कुनै एकवटा तथा दुईवटै नम्बर सुरक्षित राख्ने हो भने हराएको बेलामा यसैको सहायताले तपाईको नम्बर पत्ता लाग्न सक्छ । आइएमइआइ नम्बर भएका मोवाइल हराएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ । आइएमइआइ नम्बरका आधारमा सम्बन्धित मोवाइल ट्रयाक गरिन्छ । यसरी ट्रयाक गरिसकेपछि मोवाइलमा नयाँ सिम प्रयोग हुनेबित्तिकै मोवाइल नम्बरका आधारमा प्रहरी सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ने गर्छन् ।
यसरी थाहा पाउनुहोस् तपाईको मोवाइल सक्कली कि नक्कली ?
हामी मोवाइल चलाउन त जान्दछौ तर हामीहरुलाई आफूले बोकेको मोबाइल सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छुट्याउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ । मोबाइल किन्ने बेलामा त मोबाइल पसलेले नक्कली हो भन्ने कुरा आउँदैन उसले सबैजसो मोबाइललाई सक्कली नै भनिरहेको हुन्छ । यदी हामी त्यस कुरामा अनविज्ञ भएमा हामी सहजै ठगिन सक्छौ । त्यसकारण मोबाइल सक्कली र नक्कलीमध्ये कुन हो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ केही उपायहरु तपशीलमा रहेका छन् । तौल स्मार्टफोन बनाउने कम्पनीले उसको अफिसियल वेबसाइटमा त्यस मोडलसँग जोडिएको सबै जानकारी सेयर गरेको हुन्छ । त्यस जानकारीमा उक्त स्मार्टफोनको तौल पनि उल्लेख हुन्छ । कुनैपनि स्मार्टफोन फेक छ भन्ने कुरा त्यसको तौलबाट पनि सजिलै थाहा लाग्छ । स्पिड र फिचर्स नक्कली स्मार्टफोनको स्पिड असली स्मार्टफोनको तुलनामा कम हुन्छ । यसलाई सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । फेक स्मार्टफोनमा सफ्टवेयरको सहयोगले त्यसको हार्डवेयर डिटेल बदल्न सकिन्छ । त्यस्तै यस स्मार्टफोनको पहिचान फिचर्सको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । सक्कली स्मार्टफोनमा जुन फिचर्स हुन्छ, नक्कलीमा हुँदैन ।
मूल्य फेक स्मार्टफोनको लागत सक्कलीको तुलनामा निकै सस्तो हुन्छ । सस्तो पाए भन्दैमा मख्ख नपर्नुहोस्, तपाई फन्दामा पर्नुहुनेछ । बजारमा सक्कली जस्तै देखिने स्मार्टफोन एकदमै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । जब त्यो अस्वभाविक सस्तो भन्ने लाग्छ, शंका गरिहाल्नुहोस् । ग्यारेन्टी वा वारेन्टी जब नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्नुहुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । साथै फोनमा आउने वारेन्टी पेपरलाई पनि राम्ररी जाँच गर्नुहोस् । त्यसमा रिटेल शोरुम वा सपको सील लगाएको हुन्छ । स्मार्टफोनले अक्सर एक बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको वारेन्टी दिएको हुन्छ । रंग र डिजाइन जब तपाई मोबाइल खरिद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । यसका लागि तपाईले सम्बन्धित मोवाइल कम्पनीको आधिकारिक वेवसाइट क्लिक गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले फोनको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ । त्यसमा तपाईले मन पराएको मोवाइलको डिजाइन र रंग पनि बताएको हुन्छ ।
वेवसाइटमा हेरे जस्तै दुरुस्तै मिल्ने भए मात्र त्यो डिजाइनको मोवाइल किन्नुहोस् । स्मार्टफोनको लुक यदि नक्कली स्मार्टफोनको लुक सक्कली जस्तै छ भने धोका खान सक्नुहुन्छ । किनभने धेरैले मोवाइलको लुक्स हेर्छन् । त्यसपछि मात्र फिचर्स । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला स्मार्टफोनको बडीको फिनिसिङका साथसाथै कम्पनीको लोगो र डिजाइन पनि हेर्नुहोस् । लोगो ठिक छ छैन रु डिजाइनमा कुनै गडबड पो छ कि रु त्यती मात्र होइन, फोनको बक्स निकालेर त्यसको प्याकिङ र वारेन्टी पेपर पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् ।